EUkraine - umbuso. Oku iqulathe kwimimandla 24, eCrimea nezixeko amabini iwonga: Uhambo - eyinkunzi sixeko sikhulu, yaye Sevastopol. Ukraine yiriphabliki yasepalamente-kamongameli. Igunya liphezulu Urhulumente iBhunga Ephakamileyo Ukraine, njengentloko yombuso - Mongameli Ukraine.Abemi Ukraine ohlala kwindawo yesibhozo eYurophu. Ngokutsho kubalo, eyayiqhutyelwa 2001 Ukraine ngaphezu kwezigidi 48,4 abantu. Kwezi, 77,8% abo Ukrainian, 17.3% - Russian. Abemi ezidolophini yi 67,2%. Ulwimi lwaseburhulumenteni Ukraine Ukrainian. Ngenxa yoko kilkasotlitnoho l kwimimandla yasempumalanga kunye esemazantsi kolwimi Russian. Uninzi lwabantu bobabo eMpuma Rite amaKristu - Orthodox nesiGrike amaKatolika. Okunye iinkonzo: amaRoma Katolika, kobuProtestanti, Islam.
IYukreyini - lizwe kwimizi-kwezolimo ubukho kwemveliso zemathiriyeli ekrwada. Le yenye abathumela aphambili ezinye iimveliso zezolimo kunye nokutya. uqoqosho lwesizwe abantu kuquka amashishini ezifana: zezimbiwa (amalahle, i-oyile, igesi, intsimbi kunye manganese ore), ezinye ubunjineli, ezingathabathekiyo kunye nonferrous, Ukraine na ungumlimi enamandla ombane. Ukuveliswa izithuthi lokwazisa, Hewana kunye nezixhobo zokuhlola isithuba. Ukraine ungumlimi enkulu yezixhobo - amatanki, moya yezothutho emkhosini, emhlabeni- anti-moya, izixhobo zokukhanyisa.Ukraine ngomnye wamalungu aseka yeZizwe eziManyeneyo kwaye lilungu lemibutho ngamazwe ngaphezu amane.